ရွှေဖရုံသီး Zucchini ပေါင်မုန့် (Moist and Delicious!) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
၂၁ ရက်ပြင်ဆင်ချက် ၁၂၀၀ ကယ်လိုရီ
ရွှေဖရုံသီး Zucchini ပေါင်မုန့်
ရွှေဖရုံသီး Zucchini ပေါင်မုန့် အရသာနှင့်လက်ျာနွေးကျဆုံးခြင်းနံ့သာများနှင့် add-ins များဖြင့်တင်ဆောင်သည်။ ဒီပေါင်မုန့်ဟာကျွန်မတို့ရဲ့ပုံမှန်အစားအစာတစ်ခုပါ ငှက်ပျောသီးပေါင်မုန့်ကြော် ထိုသို့လုပ်ဖို့ဒါလွယ်ကူပါတယ်။
ဒီမုန့်ကိုငါအရမ်းချစ်တယ်။ ဖရုံသီး၊ zucchini နှင့်အရသာရှိလှသည့်အမွှေးအကြိုင်များပါသောချိုသော၊ fluffy အမြန်ပေါင်မုန့်။ သင်ကော်ဖီသောက်ချိန်အတွက်ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်စေ၊ သင့်ကလေးများနေ့လည်စာစားချိန်တွင်အရသာရှိသောအရသာတစ်ခုကိုသာသင်လိုချင်သည်ဖြစ်စေ၊ ဤရွှေဖရုံသီး Zucchini မုန့်သည်အဖြေဖြစ်သည်!
ငါဒီနှစ်ငါ့ဥယျာဉ်ထဲမှာ zucchini ပိုလျှံခဲ့ရိုးရာ zucchini မုန့်အပေါ်ကျဆင်းလှည့်ကွက်ချင်တယ်! ဖရုံသီးနှင့် zucchini နှစ်မျိုးလုံးသည်မုန့်ဖုတ်ခြင်းကိုအစိုဓာတ်ဖြစ်စေသည် Zucchini Brownies သို့မဟုတ်ပင်အရသာ ချောကလက်ဖရုံသီးမုန့် ) ။
ဖရုံသီး Zucchini ပေါင်မုန့်လုပ်နည်းအတွက်သိကောင်းစရာများ
သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ် အဆိုပါ zucchini ကျေးဇူးတင်စရာပါ လက်ကိုင် grater နှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံးအခွံဖို့မလိုအပ်လည်းမရှိ (စိတ်မပူပါနဲ့, သင် zucchini ပင်ရှိသေး၏ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်) ။
အဆိုပါ zucchini ညှစ်မထားပါနဲ့ မုန့်များကိုစိုစွတ်အောင်ထိန်းရန်အစိုဓာတ်လိုအပ်သောကြောင့်ဤစာရွက်အတွက်ခြောက်သွေ့ပါ။
ပေါင်မုန့်အားလုံးကဲ့သို့ပင်စိုစွတ်သောနှင့်ခြောက်သွေ့သောအရာများကိုပေါင်းစပ်သည်အထိရောမွှေပါ အလွန်အကျွံရောနှောခြင်းက chewy ခြောက်သွေ့သောမုန့်ကိုဖြစ်စေသည် ။
ဘေးထွက် Glaze: ဒီမုန့်အပေါ်ပြီးပြည့်စုံသော topping ထိပ်ဆုံးသောမုန့်ဒိန်ခဲ။ ဒါဟာချိုသောဒိန်ခဲနှင့်သကြား၏ပြီးပြည့်စုံသောချိန်ခွင်လျှာနှင့်အတူချိုမြိန်ခြင်းနှင့် creamy ပဲ! သတိပြုရမည်မှာ topping သည်ပျော့ပျောင်း။ နှင်းခဲကဲ့သို့ပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီမုန့်ကိုခုတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲစားမယ်ဆိုရင်ငါဟာအပေါ်ယံမျက်နှာပြင်မှာမိုးရွာစေတယ်။ မရရှိလျှင်ကျွန်ပ်သည်စားသည်ဖြစ်စေစားချင်တိုင်းစားပါကလွဲလျှင်ငါသည် glaze ကိုကျော်သွားခြင်းသို့မဟုတ်အပိုင်းအစတစ်ခုချင်းစီအပေါ်အနည်းငယ်ရေခဲခြင်းများပြုလုပ်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်ဖရုံသီး Zucchini မုန့်ကိုသိုလှောင်နည်း
ငါ့မိသားစုလုံးဝဒီမုန့်ကိုချစ်တယ်! ငါသူတို့၏ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသောလက်များမှမည်သည့်မုန့်ကိုမျှမယူနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်အခန်းအပူချိန်တွင် (၂) ရက်ကြာသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
ရေခဲသေတ္တာ နောက်ထပ်စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုကဒီပေါင်မုန့်ကိုလှီးဖြတ်ပြီးအေးခဲအောင်လုပ်ပြီးမုန့်အနည်းငယ်ကိုသရေစာတစ်ခွက်ယူဖို့ဒါမှမဟုတ်နေ့လယ်စာအိတ်ထဲထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ မိနစ် ၂၀ ခန့်အကြာတွင်ကောင်တာပေါ်မှရေခဲလိမ့်မည်သို့မဟုတ်မိုက်ကရိုဝေ့တွင်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှလှည့်စားသွားလိမ့်မည်။
လွယ်ကူသောဖရုံသီး Muffins - ကြီးမားသောအသုတ်မုန့်ဖုတ် ... ကောင်းစွာအေးခဲ!
ဖရုံသီးဟင်းချို - အစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံး!
ရွှေဖရုံသီးချောကလက် Chip ကွတ်ကီးများ
ဖရုံသီး Pie စာရွက် - ဂန္ထဝင်ဖရုံသီးပိုင်ရှင်စာရွက်!
ရွှေဖရုံသီးချောကလက် Chip Zucchini ပေါင်မုန့်
ပြင်ဆင်ချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၂၈ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၄၈ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၃၂ ချပ် စာရေးသူHolly Nilsson အရသာနှင့်အတူလွယ်ကူသောနှင့်စိုထိုင်းသောအမြန်ပေါင်မုန့်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၃ ခွက် ဂျုံမှုန့်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သစ်ကြံပိုးခေါက်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါမှုန့်
▢နှစ် ခွက် သကြားဖြူ
▢1/3 ခွက် ဟင်းရွက်ဆီ
▢၁ ခွက် စည်သွတ်ဖရုံသီး (ဖရုံသီးပိုင်အမှုန့်မပါ)
▢နှစ် ခွက် ဖျက်စီး zucchini , ယိုစီးသို့မဟုတ်မညှစ်ဘူး
▢1/2 ခွက် walnuts သို့မဟုတ် mini ကိုချောကလက်ချစ်ပ် (ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်)
Cream ဒိန်ခဲ Glaze
▢1/4 ခွက် ဒိန်ခဲမုန့် ပျော့ပြောင်း
▢၄ ဇွန်း သကြားမှုန့်
▢3-4 ဇွန်း အလင်းရောင်မုန့်
Preheat 350 ဒီဂရီအက်ဖ်အထိမီးဖို အမဲဆီ မုန့်ညက်နှစ် flour မဲ၊
အိုးကြီးထဲမှာ ပေါင်းစပ် မုန့်ညက်နှင့်မုန့်ညက်, သစ်ကြံပိုး, ဆား, မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်မုန့်ဖုတ်မှုန့်။ သီးခြားပန်းကန်လုံးထဲမှာ ရောမွှေပါ ကြက်ဥ၊ ဆီ၊ ဖရုံသီးနှင့်သကြားဓာတ်။
ထည့်ပါ ပါဝင်ပစ္စည်းများခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်သည်အထိနှိုးဆော်ဖို့ဖရုံသီးအရောအနှော။ ခေါက်ပါ အသုံးပြုလျှင် zucchini နှင့်အခွံမာသီးသို့မဟုတ်ချောကလက်ချစ်ပ်၌တည်၏။ ဘို့ ပြင်ဆင်ထားအိုးထဲသို့။
မီးဖို၌ထားပါနှင့် 325 ဒီဂရီအပူလျှော့ချပါ။ မုန့်ဖုတ် ၉x၅ ဒယ်အိုးအတွက်မိနစ် ၄၀ မှ ၅၀ နှင့် ၈xx ဒယ်အိုးအတွက်မိနစ် ၄၀ မှ ၅၀ မိနစ်သို့မဟုတ်သွားတိုက်တံသန့်ရှင်းသည့်အထိရောက်သည်။ မဖိတ်ပါနဲ့
အေး မိနစ် ၂၀ နှင့်အိုးများမှဖယ်ထုတ်ပါ။
အတူတူမုန့်ဒိန်ခဲ & အမှုန့်သကြား Beat ။ glaze အလိုရှိသောကိုက်ညီမှုရောက်ရှိသည်အထိတစ်ကြိမ်တွင်မုန့်အနည်းငယ်ရောမွှေပါ။ အအေးခံမုန့်များကိုလောင်း။
သော့ချက်စာလုံးချောကလက်ချစ်ပ်ပေါင်မုန့်၊ ဖရုံသီးပေါင်မုန့်၊ zucchini ပေါင်မုန့်၊ zucchini ဖရုံသီးမုန့် သင်တန်းမနက်စာ, အချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
ပူနွေးသော Apple Pie မုန့်
အကြိုက်ဆုံး Toffee စာရွက်
စတော်ဘယ်ရီ Rhubarb Cobbler
ငှက်ပျောသီး Pudding ကိတ်မုန့်